Imaam Zeynu Diin Al-Ciraaqi | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Turjumada Xaafidhkii la odhan jiray Zeynu Diin AlCiraaqi
Magaca iyo Dhalasha Imaamka Sheekhan waxaa la yiraahdaa Sh C/Raxmaan Xuseen C/Raxmaan Abubakar Ibraahim Kurdi A-Rayzaani . Asalkiisa sheekhu waa reer Ciraaq, waxuuse ku dhashay Dalka Masar. Madh-habta sheekhu waxay ahayd Shaaficiyah. Imaamku waxaa la odhan jiray kunyadiisa Abuu Fadhal, waxaana lagu naanaysi jiray (Zeynu Diin).Imaamku waxuu dhashay 21kii Jamaadul Awal sanadkii 725Hijriyah.
Sheekha awoowyaashii waxay ahaayeen kuwa degan Ciraaq tuula la yidhaahdo Raziyaan, ilaa intuu imaamka aabihii uu isagoo yar iyo qaraabadiisuba usoo wareegeen dalka Masar. Halkaas ayuuna sheekha aabihii ku nagaaday ilaa uu heer markii danbena ka guursaday gabadh Masriyad ah, gabadhaas oo u dhashay Imaam Zeynu Diin.
Qoyska Imaamka uu ka dashay waxaa lagu yaqiinay Zaahidnimo, Toosnaan iyo Allah ka cabsi. Waxuuna Ilaahay subxanahu watacaala ogu deeqay darajaad iyo waxyaabo lagu faano. Hooyada Imaamka dhashay waxay ahayd mid ku can baxday ku dadaalida cibaadada, Allah u dhawaanshaha, sabirka iyo qaneecada Rabigeed. Halka aabihisna uu go’ay laga soo bilaabo intuu yimid Masar , u adeegida dadka wanaagsan. Waxaana ugu caansanaa dadka uu adeegi jiray Sheekh Alqanaawi.
Imaamku waxuu Ilaahay subxaanahu watacaalaa ku irzaaqay caruur . Waxaa kamid ah caruurtiisa Axmed oo kunyadiisu tahay Abaa Zurcah laguna naanaysi jiray Waliyyudiin. Sidoo kale waxuu sheekha loo dhalay gabadh la yidhaahdo Khadiija, taasoo uu kula xididay Xaafidka la odhan jiray Nuura Diin Al Haythami, waxayna udhashay caruur.
Masaadirta qaar waxay sheegaan Imaam Zeynu Diin inu lahaa laba gabdhood oo lakala yidhaahdo Zeynaba iyo Juweyriya.
Sidaan sheegnay Xafaidh Zeynu Diin al Ciraaqi waxuu ku dashay dalka Masar, waxaana magaca u bixiyay Sheekh Alqanaawi. Nasiib darro Sheekha aabihiis muddo dheer lama uusan noolaanin oo Ilaahay ayaa oofsaday. Sheekhuna xiliga uu aabihii geeriyooday muusan gaadhin 3 sano. Sheekha noo soo tabinaya qisada waxuu sheegay inuusan ogayn cidii kafaalo qaaday sheekha , laakiin malahaygu waxuu u badanyahay ayuu yidhi in Imaam Alqanaawi uu kafaalo qaaday
Imaam Zeynu Diin waxuu xifiday bartayna Qur’aanka iyo Culuumta luuqada isagoo jira 8 sano. Sheekha go’aanka ahaa inuu barto Qir’aatka iyo culuumta luuqada kama uusan daciifin ilaa markii danbe uu kula taliyay Sheekhiisii Ibnu Ciz binu Jamaca inuu ka leexdo majaalkan oo himadiisa uu uleexiyo dhanka culuumta xadiithka, maxaa yeelay sheekhu waxuu ahaa mid ay badantahay maxaasintiisu/wanaagiisu, iyo sidoo kale fahamkiisa. Waxuuna ku dhahay “Cilmiganu (yacni luuqada) waa mid dhib badan, daal badan, faa’iidadiisuna ay yartahay, nin maskax iyo faham lehna waatahe uu leexi himadaada dhanka Culuumul Xadiith”. Go’aankii sheekha ayuu qaatay waxuuna sii waday dadaalkiisii iyo cilmi raadista, isagoo bilaabay barashada Cilmiga Qiraa’aatka .
Sidoo kale sheekhu waxuu ahaa mid tagga casharada fiqhiga ee culimada akhriyaan, sida Ibnu Cidlaan, Laazim Al Cimaad, Muxamed bin Isxaaq Albiliisi.
Sheekhu waxuu wax ka qaatay culimada kala ah:
Shamsi Bin Al-labaan
Jamuludiin Al Isnawi
Waxuu kale oo wax ka dhagaystay:
Sheekh Cali C/raxmaan bin Shahid Al Jaysh
Waxuuna wax ku dul akhriyay:
Sheekh Shihaabu Diin bin Al-Baaba
Sheekhu waxuu u leexiyay himadiisii Cilmiga takhriijinta isagoo jira 20sano, waxuuna aha amid aad u jecel takhriijinta.
Booskiisa cilmi ahaaneed , iyo hadaladii ay culumadu ka dhaheeen:
Waxii aan soo sheegnay waxaynu ka aragnay booska uu joogay Xaafidku , ee Ilaahay waafajiyay. Waxuuna Ilaahay ku manaystay fiirshasho badan, maskax badan oona nadiif ah iyo xifdi fudud. Sidaa daraadeed dhamaan culimada la daristay way u qireen darajadaas .
Sheekhiisa la odhan jiray Ciz binu Jamaaca waxuu yiri “ Qof kasta oo sheegta inuu yaqaano cilmiga xadiithka isagoo jooga Masar oo aan ahayn Imaam alciraaqi , qofkaasi waa sheegte uun”.
Ibnul Jazari waxuu yiri “Xaafidkii Masar iyo Muxadithkeedii iyo sheekheedii weeye”. Ibnu Xajar waxuu yiri “Xaafidkii weynaa waa sheekheenii caanka ahaa”.
Waxaa halkaas inoogu cadaatay in ay culimadu amaaneen kuna tilmaameen aqoon badni.
Imaam Zeynu Diin waxuu qabsaday oo qaadi/garsoore ka noqday Madiina, waxuuna ahaa sidoo kale Imaamka iyo Khadiibka Madiina, muddo sadex sanno iyo 5 bilood ah.
Ardaydii Shiikha :
Sheekhu waxuu lahaa arday aad u fara badan waxaana kamid ah :
Ibnu Xajar Alcasqalaani
Burhaanu diin Ibnul Cajami
Waliyyu diin Abuu Zurca Alciraaqi oo ah wiilka imamka Nuuradiin AlHaythami
Waxaa sheekha la oofasaday maalin arbaca ah bisha Shacbaana tahay 8 , sanadku markuu ahaa 806 Hijriyada, isagoo sida la sheego markaas uu kazoo baxay xamaamka. Cimriga sheekhu waxuu ku dhawaa 81 sano. Janaazo weyn ayaa loo sameeyay sheekha waxaana ku tukaday Shihaabu Diin Aldhahabi. Imaamka waxaa lagu aasay banaanka Qaahira. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu ka baryaynaa inuu u naxariisto sheekha.
WQ: MOhammed Camaleeti
from → Imaam Zeynu Diin Al-Ciraaqi, Taariikhda Culimada Xadiith-ka
← Maktabad miyaad leedahay? Q1aad
Sheekh Muqbil binu Haadi →
Najma permalink	April 26, 2015 5:24 am	Jazakalahu khayran akhi Mohamed , Alle hakaa abaal mariyo wanaagaa walalaha la qaybsanayso aamin, halkaa ka wada dadaalka dhamantiin walalaha khayrka ka shaqeeya shaqadaan weyn isku xil saaray ,
Blog Stats Since October 2010	48,768 hits